फेरि अस्थिरता ? – Sajha Bisaunee
फेरि अस्थिरता ?
सम्पादकीय । २२ असार २०७७, सोमबार ०६:०० मा प्रकाशित
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र यतिबेला चरम विवाद देखिएको छ । विवाद चुलिदै जाँदा पार्टी नै फुट्ने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीचको टकराव अन्त्य गर्ने प्रयास पनि भइरहेकै छन् । यसका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् । तर छलफलले सहमतिको विन्दु पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा गठबन्धन बनाएर होमिएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा दुई वर्षमै फुटको संघारमा पुगेको छ । विशेष गरी तीन नेता केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको शक्ति संघर्षका कारण पार्टी फुटको जोखिममा आइपुगेको हो । दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको पहलका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सार्वजनिक रूपमै आफूलाई हटाउन भारतीय चलखेल भएको र त्यस्तो चलखेल गर्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरूसमेत रहेको सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन् । त्यही पृष्ठभूमिमा नेताहरूबीच चुलिएको तिक्तता विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै यो काममा आफ्नै पार्टीका नेताहरू संलग्न रहेको संकेत गरिसकेका छन् । जुनसुकै स्टेप सामना गर्न आफू तयार रहेको जनाउँदै उनले मन्त्रीहरूलाई अबको आफ्नो बाटो पनि स्पष्ट पार्न सुझाएका छन् । दुई वर्षअघि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा लगाउँदै जनमतको बलमा शासन सत्तामा पुगेको नेकपा आफैंले निर्धारण गरेको कार्यभारलाई लत्याउँदै यतिबेर नेताहरूको अविश्वास र कार्यशैलीगत कमजोरीको दोसाँधमा आइपुगेको हो । आइतवारसम्म विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा नेकपा नेताहरूको अडान एकले अर्कालाई नस्विकार्ने खालको छ । दाहाल–नेपाल समूह कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईमध्ये एउटा पदबाट हटाउन चाहन्छ । ओलीलाई अहिले पनि ठेगान लगाउन सकिएन भने ज्यादती अझै आफूहरूले खेपिरहनुपर्ने सोचाइ उक्त समूहको छ । त्यसैले दाहाल–नेपाल समूह कुनै पनि हालतमा आफ्नो पोजिसन नबदल्ने अडानमा छ । यो अडानलाई ओलीले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा लिएका छन् । उनले बेलाबेखत राष्ट्रपतिका विषयमा समेत असन्तुष्ट नेताहरूले दिइरहेका अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई समेत हटाउने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छन् ।
नेकपाको यो संकट टार्न भन्दै जारी स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको थियो । तर यही रोकिएको समयमा दाहाल–नेपाल र ओली दुवै पक्षले एकताको प्रयासभन्दा शक्ति सञ्चय गर्ने र आ–आफ्नो पक्षको मत निर्माण गर्ने काममा समय खर्चिइरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने नेताहरू शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्नो पोजिसन बदल्नुपर्ने बताउँछन् । नेकपाको विवाद केवल उक्त पार्टीभित्रको अन्तरकलह मात्रै होइन । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई त प्रभावित पार्छ नै मुलुकलाई विगतकै अस्थिरतातर्फ डो¥याउँछ । दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनेसँगै अस्थिरता अन्त्य हुने, मुलुक आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्ने आम विश्वासमाथि नेकपाको कलहले शंका उत्पन्न गराएको छ ।